महाराजको सिंहासन- विविधा - कान्तिपुर समाचार
छोटे राजा आफ्नो सिंहासन आफूसँगै बोकेर हिँड्न थाले । जहाँ पुगे पनि पहिले सिंहासनले त्यो ठाउँको शोभा बढाउँथ्यो, त्यसपछि उनी सिंहासनको शोभा बढाउँथे । विदेश जाँदा पनि सिंहासन उनीसँगै हुन्थ्यो, अस्पताल जाँदा पनि ।
वैशाख २०, २०७७ शरच्चन्द्र वस्ती
ठूलो तामझामका साथ शपथग्रहण सम्पन्न भयो र देशीविदेशी शत्रुहरू परास्त भएको घोषणा गर्दै छोटे राजाले गद्दी आरोहण गरे । दुई सातासम्म सबै सामान्य थियो । उनी ऐनामा आफूलाई हेर्थे र आफैं दंग पर्थे । भाट र चारणहरूको स्तुतिगान सुनेर आनन्दित हुन्थे ।
नगरका गल्ली, चोक र सडकमा, घरका भित्ता र बिजुलीका खम्बामा उनका तस्वीर शोभायमान थिए । स्वजनको त के कुरा भयो र, खम्बामुनि नित्यकर्म गर्दा श्वजन समेत मुन्टो उठाएर मुग्धभावले उनको अनुहार नियालिरहेका हुन्थे । दाजुभाइहरू दंगदास थिए— माइलाले दिग्विजय गरेकोमा । खुशीले तिनको मुख अहोरात्र आधा च्यातिएको हुन्थ्यो । निद्रामा पनि ।
तेस्रो सातादेखि फरक दृश्य देखिन थाल्यो । छोटे राजा आफ्नो सिंहासन आफूसँगै बोकेर हिंड्न थाले । जहाँ पुगे पनि पहिले सिंहासनले त्यो ठाउँको शोभा बढाउँथ्यो, त्यसपछि उनी सिंहासनको शोभा बढाउँथे । विदेश जाँदा पनि सिंहासन उनीसँगै हुन्थ्यो, अस्पताल जाँदा पनि । प्रातःकाल एक्लै प्रयोग गर्नुपर्ने सानो कोठाको ढोका समेत सिंहासन छिर्न सक्ने बनाइएको थियो । शयनकक्षमा सुकला हुँदा उनको दाहिने हातले सिंहासनको खुट्टामा
बाँधिएको सुनौलो डोरी थामेको हुन्थ्यो । मध्यरातमा शौचालय जान लाग्दा रानी त्यसमा अल्झेर साढे दुईपल्ट लडिसकेकी थिइन् ।
सिंहासनमा बसेपछि उनको आँखामा अनौठो चमक आउँथ्यो र मुख राम्रैसँग खुल्थ्यो । उनले आफूलाई स्वप्नदर्शी घोषणा गरेका थिए । भोकाहरूलाई घरघरै बिहान–बेलुका चौरासी व्यञ्जन आइपुग्ने सपना बाँड्थे । पानी माग्नेहरूलाई पानीजहाजको टिकट खुल्ने मिति सम्झाउँथे । नांगाहरूलाई भ्यूटावरको महत्त्व सुनाउँथे । भिखारीहरूलाई स्याटलाइट सिटी बन्ने विश्वास दिलाउँथे । झोलुंगे पुन माग्नेहरू समक्ष चुच्चे रेलको कथा हाल्थे । हेलिकप्टरबाट केक मगाएर सुदूर पहाडमा जन्मदिन मनाउन पुग्थे । सानोमा आफूले नुहाउने गरेको पँधेरोलाई राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्र र डन्डीबियो खेल्ने गरेको खेतको गह्रोलाई अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने घोषणा गरेर फर्कन्थे । औंसी–पूर्णेमा दाजुभाइलाई वरिपरि राखेर बाँसुरी बजाउँथे । लोकप्रियता खस्किन्छ कि भनेर कसैले चिन्ता गर्‍यो भने भन्थे, ‘मूला जति उँधो लाग्यो उति सप्रन्छ । उति पोटिलो हुन्छ । विज्ञानसम्मत कुरा यही हो ।’
यसैबीच कोरोनाले विश्व भ्रमण शुरू गर्‍यो । आरामसाथ कौसीमा चढेर उनले लकडाउनको आदेश जारी गरे,
‘अब घरबाहिर ननिस्कनू । घरबाहिर नहेर्नू । घरबाहिरका कुरा नसुन्नू । घरबाहिर सुनिने गरी नबोल्नू । बाहिर जे गर्नु छ, हामी गर्छौं । चासो नदिनू । स्वतन्त्रताको सपना नदेख्नू । नत्र ढाड सेकाइन्छ । कोरोनाको होइन, नागरिकको ।’ आफ्नो सर्वज्ञता प्रकट गर्दै उनले निर्देशन दिए, ‘कोरोना आफैं मरिसकेको निर्जीव वस्तु हो । कालो चश्मा लगाएर तातो पानीले हात धुनू, यसको पत्तासाफ हुन्छ । यसले केही गर्न सक्तैन ।’
कौसीबाट ओर्लंदा छोटे राजा गद्गद थिए । रानीसँग भने, ‘आज मैले ठूलो काम गरें । दुनियाँ मेरो काम देखेर चकित छ । मेरो नाम गिनेस बुकमा आउँदै होला । अब अर्को ठूलो काम गर्नु छ ।’
भन्दैगए, ‘कोरोनाले पुराना सपना ध्वस्त पार्ने भो । बहुत राम्रो हुने भो । अब जनतालाई नयाँ सपना चाहिन्छ । सपना देख्न आँखा चिम्लनुपर्छ । म पनि कोरोना–सोरोनाबाट आँखा चिम्लन्छु । मेरो निद्रा नबिथोल्नू ।’ र, सिंहासन घिसार्दै शयनकक्षमा पसी सिरक ओढेर सुते ।
बीचबीचमा दाजुभाइहरू भेट्न जान्थे । बैठक कक्षमा दुई घण्टा प्रतीक्षा गर्थे । चिया खान्थे । मोबाइल चलाउँथे । अन्त्यमा सिरकमुनिबाट निस्केका दुई चरणको दर्शन गरेर फर्कन्थे । सारै जरूरी पर्दा आदेश र निर्णय सांकेतिक भाषामा आउँथ्यो । सल्लाहकारले अर्थ खुलाइदिन्थे— बूढीऔंला हल्लियो भने ‘हुन्छ’, पूरै पैताला हल्लियो भने ‘हुँदैन’ । केही सल्लाहकार विशेष शक्तिशाली मानिन्थे । तिनमा पैताला हल्लाइदिन सक्ने हैसियत रहेको विश्वास गरिन्थ्यो । तिनले माफिया, व्यापारी र ठेकेदारको फाँट सम्हालेका थिए ।
माइलो किन यस्तो भयो भन्ने बुझ्न नसकेर दाजुभाइहरू दिक्क हुँदैगए । त्यही रनाहामा एक दिन साइँलो एक धार्नी छोएला लिएर भैंसीबाबाकहाँ पुग्यो । केही वर्षअघि उनैले भैंसीपूजा गराएर उसको भाग्य जगाइदिएका थिए । साइँलाले मनको बह पोखेपछि माइलाको रहस्य खोल्दै बाबाले भने :
अहिले ऊ बस्ने गरेको सिंहासन उहिलेका श्री ३ महाराजको सिंहासन हो । गद्दीमा बसेको एक हप्तापछि माइलो त्यो गद्दी नून नहालेको तर्कारी जस्तो भो भन्दै मकहाँ आएको थियो । ‘मलाई महाराजको सिंहासन ल्याइदेऊ’ भनेर खूब रोड्याइँ गर्‍यो । मैले ‘तँ श्री ३ को विरोधी हुँ भनिहिंड्नेलाई फेरि किन चाहियो श्री ३ कै सिंहासन ?’ भनेर हप्काएँ । उसले ‘त्यो त दुनियाँलाई देखाउन भन्या नि’ भनेर ङिच्च गर्‍यो र ‘म श्री ३ होइन, श्री ३ लाई हटाउनेहरूको पो विरोधी, मेरा असली दुश्मन त ती पो हुन्’ भन्दै मेरा खुट्टा समात्यो । दुई दिनसम्म त मैले सक्तिनँ, हुँदैन नै भनें । त्यो सिंहासन खतरनाक छ, त्यसमा बसेपछि दाजुभाइले नै सिध्याउँछन् भनेर डर पनि देखाएँ । तर उसले मान्दै मानेन । एकदमै अपहत्ते गरेपछि तेस्रो दिन मध्यरातमा तीन घण्टा राँगोपूजा गराएर महाराजको सिंहासनको आत्मा त्यसमा हालिदिएको छु । तीन गद्दीको शक्ति छ त्यसमा । त्यही भएर ऊ सिंहासन बोकी हिंड्छ । त्यसमा बस्यो कि उसमा श्री ३ को भूत सवार हुन्छ । अनि तिमीहरूलाई के गन्थ्यो त्यसले ?
‘कसरी तीन गद्दी भए प्रभु ? माल्दाइसँग त दुई गद्दी मात्र छन्— एउटा हामीले दिएको, अर्को दुनियाँदारले दिएको । होइन र ?’ साइँलाले हात जोड्यो ।
‘ए हुस्सू १ गर्मी भएको वेला कहिलेकाहीं शीतल–पाटी जाने गरेको छस् कि छैनस् ?’ बाबाले उसको अज्ञानतर्फ इंगित गरे, ‘तेस्रो गद्दी त्यही हो । हरेक गद्दीको शक्ति एउटा चकटीमा हालेर तीनवटा चकटी खापिएको छ त्यो सिंहासनमा । के बुझिस् ? हेर्दै जाओ, अब के के गर्दो रहेछ माइलाले ।’
भैंसीबाबाबाट सिंहासनको रहस्य थाहा पाएपछि दाजुभाइहरू माइलाले हाच्छिउँ गर्दा पनि झस्कन थालेका थिए । एक दिन अचानक छोटे राजा हातमा खड्ग लिएर शयनकक्षबाट निस्केको सुनियो । पहिले त उनीहरूको होशहवासै उड्यो तर एकै छिनमा आँट गरेर ठाउँको ठाउँ झ्यापझुप समाते । र हप्काए, ‘क्या हो, हामीलाई हान्न हिंडेको ?’
हडबडाउँदै उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई होइन । यसो दुश्मनहरूलाई तर्साउनुपर्‍यो भनेर ।’
‘मलाई पत्यार लागेन माइला,’ जेठाले भने, ‘पहिला यो हतियार हटाइहाल् ।’ घेराबन्दीमा परेका छोटे राजाले आनाकानी नगरी खड्ग बिसाए ।
‘वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसरी राजकाज चल्न सक्तैन,’ जेठाको बोली तत्काल उच्च भयो, ‘सबै चकटी तैंले मात्र ओगट्ने ? एउटा चकटी मलाई चाहिन्छ ।’
‘मलाई पनि एउटा चकटी दिने भनेर मने निश्चित रूपमा खोलमा झुलाइरहेका छौ दाजै । सहनुको पनि हद हुन्छ, कति सहनु ?’, साइँलाले ङ्वार्र गर्‍यो ।
‘सानो भनेर नहेप नि । चकटी त मलाई पनि चाहिन्छ,’ यो कान्छाको स्वर थियो ।
‘हो, हो । एक व्यक्ति एक चकटी हुनैपर्छ । नत्र बाँकी राखिंदैन । गुठियार बोलाइन्छ र ठीक लगाइन्छ,’ काइँलाले जग हाल्यो ।
चारै जना आवेशमा आएर उफ्रिन थालेपछि कोलाहल मच्चियो । एक छिन तमाशा हेरेर छोटे राजाले भने, ‘साइँलालाई एउटा चकटीको खोल दिएकै छु । चाहिन्छ भने जेठालाई पनि दिउँला । अरू जे भन्छौ ठीकै छ । चकटीकै आस चाहिं कसैले नगरे हुन्छ । त्यो मेरो सिंहासनको अभिन्न अंग हो ।’
‘भाग त लगाउनैपर्छ’ सामूहिक स्वर घन्कियो ।
‘ए, मेरो सिंहासनै भत्काउने ?’ छोटे राजा गर्जिए, ‘त्यो दिन आउनुभन्दा अघि यहाँ धेरै थोक भत्किन्छ ।’ उनको रक्तचाप बढिसकेको थियो, ‘मसित एउटा मात्र हतियार छ भन्ठान्या ? मर्नु परेपछि खुट्टै तन्काएर...’
चारै जना स्तब्ध भए । वातावरण चकमन्न भयो ।
महाराजको सिंहासन मुसुमुसु हाँसिरहेको थियो । प्रकाशित : वैशाख २०, २०७७ ११:२०
वैशाख १, २०७७ शरच्चन्द्र वस्ती
जनताका घरघरै प्रकट भएर प्रधानमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि मलाई लाग्यो— यो महान कार्यमा मैले पनि केही सहयोग गर्नैपर्छ । तर के गर्ने ?
जति सोच्ता पनि दिमागले ठम्याउन सकेन । तनाव बढ्दै गएपछि राति राम्ररी निद्रा पनि लागेन । भोलिपल्ट बिहान दूध किन्न जानुपर्‍यो भनेर घरबाहिर यसो लखरलखर के गर्न थालेको थिएँ, एउटा प्रहरीले ‘तपाईं कता ? उता, उता’ भन्दै डोरीले घेरा लगाएको सडकपेटीमा उभ्याइदियो । दुई घण्टाका लागि ।
देखें, २०–२५ जना पहिलेदेखि नै खर्किरहेका । सबैजसो जल्दाबल्दा व्यक्तित्व । सोचें— यो पनि राम्रै भयो । अब यिनीहरूलाई नै सोधेर पत्ता लगाउँछु, कोरोना नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला भनेर । ‘आउनोस्, आउनोस्, के छ हालखबर ?’ एक जना हात तेर्स्याउँदै मतिर लम्किए । मैले हतारहतार दुई हात जोडेर नमस्कार गरें । तेर्सिएको हात तल झार्दै उनी मुख बिगारेर भुत्भुताए, ‘फेरि छुवाछुत फर्काउने षडयन्त्र ! असमानता बढाउने मनुवादी हर्कत !’
‘सबैले सबैलाई नमस्कार गरेपछि कसरी असमानता बढ्छ ?’ सँगैका अर्काले पाखुरा सुर्के, ‘हाम्रो संस्कृति कति वैज्ञानिक रहेछ भन्ने दुनियाँले बल्ल थाहा पायो । अब पनि यसैमाथि आक्रमण ?’उनीहरूलाई जुध्न छोडिदिएर म दुई पाइला अगाडि बढें । एक जना बुद्धिजीवी सदावहार गम्भीर मुद्रामा थिए । मेरो प्रश्न सुनेपछि फ्रेन्च कट दारी सुम्सुम्याउँदै भने, ‘देशमा यत्रो समस्या आइपरेको छ, बुद्धिजीवीको कदरै छैन । अरू नभए पनि कोरोना सम्बन्धी गोष्ठी, सेमिनार त गर्न पाउनुपर्छ नि । लकडाउनको सदुपयोग गरेर दुइटा कार्यपत्र तयार गरिसकें । यत्रो मिहिनेत सित्तैंमा खेर जाला जस्तो भो ।’
नजिकै एक जना सांसद थिए । उनले भने, ‘हाम्रो त कुरै सुनिदैन । कोरोनाबारे अध्ययन गर्न संसदीय प्रतिनिधिमण्डल विश्व भ्रमणमा नगएसम्म यसको नियन्त्रण सम्भवै छैन । तपाईं लेखेर राख्नोस् ।’
उनको क्रान्तिकारी सोचबाट रोमाञ्चित भएर म अलिक पर्तिर उभिएका कर्मचारीसामु पुगें । उनले भने, ‘हामी पनि त काम गरिराखेका छौं नि । प्रोत्साहन भत्ता चाहिं डाक्टर र नर्सलाई मात्रै किन ? हामीलाई प्रोत्साहन चाहिंदैन ? कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उच्च नभएसम्म कसरी हुन्छ कोरोना नियन्त्रण ?’त्यहीं उभिएका एक जना अघिल्लो दिनको ह्याङओभरमा रहेछन् । जीउ तन्काउँदै शुरू भए, ‘दारूपानीको आपूर्तिमा कमी नहोस् । लकडाउन सफल पार्न आफू त सधैं तयार ! झ्याप भएर सुतेपछि श्रीमतीको कचकच पनि कानमा नपर्ने । घरमा सधैं शान्ति । हाहाहा...’यति सुन्नु के थियो, दायाँतिर उभिएकी जंगी महिला जंगिइन्, ‘यही हो पुरुष मानसिकता भनेको ।
फेसबुक र ट्विटरमा पनि महिलामाथि नै मजाक, पुलिसले ठिंग्याउँदा पनि महिलामाथि नै व्यंग्य ? जहाँ पनि महिला हिंसा । कहाँ छ सरकार ? खालि कोरोना–कोरोना मात्र भनेर हुन्छ ?’
स्थिति गम्भीर हुने डरले म हत्तपत्त छेउ लागें । र, एक जना एनजीओकर्मीसँग ठोकिन पुगें । उनले भने, ‘कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्न हामी सधैं तयारै छौं । तर के गर्नु ? सरकारले नै चन्दा उठाउन बन्देज लगाएको छ । हाम्रो त पेशा नै धरापमा पर्ने भो । यसरी कसरी चल्छ ?’
त्यहींनेर तीन जना साहूजी टाउको जोरेर गुनगुन गरिरहेका थिए । एक जनाले भने, ‘बैंकको ब्याज मिनाहा नगर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र डुब्छ । हामी एकदमै चिन्तित छौं ।’ अर्काको भनाइ थियो, ‘यो असामान्य संकट हो । ब्याज मात्र होइन, साँवा समेत ५० प्रतिशत मिनाहा गर्नुपर्छ । नत्र कोरोनाले डुबाउँछ ।’
तेस्रा साहुजी भन्दैथिए, ‘यस्तो वेला ठूलाठूला सरकारी खरीदमा मात्र होइन, खुद्रा बजारमा पनि भाउ त बढ्छ नि । नत्र अर्थतन्त्र कसरी जोगिन्छ ?
एक छिन सडकमा कोही देखिएन । प्रहरी सुस्ताउन लागेको मौकामा मैले सोधें, ‘अब त मान्छे बाहिर निस्कन डराउन थाले होलान् नि ?’
छातीमा टाँसिएको नेमप्लेट एउटा हातले छोप्तै उसले भन्यो, ‘कहाँ सर, हिजोभन्दा आज झन् बढेका छन् । स्वाँठ–स्वाँठ डँडाल्नामा चार लठ्ठी नदिएसम्म कोही तह लाग्नेवाला छैनन् । तर हामीलाई अधिकारै छैन । यसरी त कहाँ हुन्छ कोरोना नियन्त्रण ?’
सडकमा तीन जना देखा परे । मास्क लगाएका । प्रहरी हतारहतार तिनीहरूतिर बढ्यो र म नजीकै ल्याएर खर्क्यायो । ऐतिहासिक पार्टीका नेताजीहरू रहेछन् । ‘कोरोना नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला ?’ मैले उही प्रश्न तेर्स्याएँ ।
नेता ‘क’ ले उपाय सुझाए, ‘तुरुन्त मध्यावधिमा जानुपर्छ । अर्को उपायै छैन ।’नेता ‘ख’ ले प्रतिवाद गरे, ‘छोड यार, यस्तो वेला को चुनाव लड्न जान्छ ? १७–१७ पल्ट लड्दा त केही हात लागेन । यो त राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने वेला हो । हामीलाई पनि सरकारमा शामेल गर्नुपर्‍यो नि !’
नेता ‘ग’ ले हप्काए, ‘तपाईंहरू चूप लाग्नोस् भन्या । म हुँदाहुँदै किन बढी ? सभापति म कि तपाईं ? ...हेर्नोस् भाइ, हाम्रो पार्टी यो सरकारलाई सहयोगै गर्न चाहन्छ । गरिआएकै हो । तर त्यसका लागि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ ।’
‘सहमति चाहिं केका लागि गर्ने ?’
‘कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि नि !’
‘अहिले चाहिं यसमा असहमत हुनुहुन्छ ?’
‘तपाईं चूप लाग्नोस्,’ उनले आफ्नो प्रिय शैलीमा औंलो ठड्याए, ‘राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण भाँड्न खोज्ने ?’
प्रजातान्त्रिक शैलीमा चूप लाग्ने आदेश भएपछि बोल्ने कुरा भएन । म नमस्कार गरेर अर्को कुनामा पुगें । त्यहाँ त स्वयं प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार खडेबाबा भएका रहेछन् । उनीसँगै थिए, एउटा हातमा तुलो बोकेर उभिएका पूर्वमन्त्री । नजीकै अर्का वरिष्ठ नेता पनि ।
मैले मुख खोल्नासाथ नेताजी बोल्न थाले, ‘द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको नियम अनुसार मानव सभ्यता जब कृषि युगमा प्रवेश गर्‍यो, उसका आनीबानी र व्यवहार पनि...’
कृषि युगबाट कोरोना युगमा आइपुग्दासम्म घरमा भान्सा उठिसक्ने डर थियो । मैले उनको बोलीमा ब्रेक लगाएँ, ‘हिजोको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन... ?’
‘हेर्नोस्, त्यो उहाँको कुरा हो । त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन । तर हाम्रो पनि एउटा हैसियत र मर्यादा छ भन्ने बिर्सन हुँदैन । औपचारिक रूपमा भन्नुपर्दा मलाई केही थाहा छैन । एउटै पार्टी भनेर के गर्नु ? ब्रेकफास्ट, लन्च वा डिनर मीटिङ नबोलाएको तीन महीना हुन लागिसक्यो । यसरी कोरोना नियन्त्रण हुन सक्छ भनेर कसैले सोच्छ भने त्यो निम्न पूँजीवादी मानसिकता तर्फको वैचारिक स्खलन हो भन्ने मेरो स्पष्ट र निर्णायक मान्यता प्रारम्भदेखि नै रहँदै आएको छ । यसका लागि म जुनसुकै बलिदान गर्न तयार छु ।’
मलाई हुलुक्क होला जस्तो भो । छातीमा हात राखेर तीनपल्ट लामो सास फेरें र सल्लाहकारतिर अभिमुख भएँ । उनले भने, ‘म अघिदेखि हेरिरहेको छु । तपाईं लकडाउनको मर्यादा उल्लंघन गर्दै हुनुहुन्छ । जोसँग पनि बोल्ने ? जसलाई पनि बोल्न उक्साउने ?’
‘लकडाउन भन्दैमा बोल्न पनि नपाइने ? स्वतन्त्रता पूरै कटौती भइसकेको हो र ?’
‘बेमौसमी बाजा नबजाउनोस्,’ तुलोधारीले उनलाई उछिने, ‘कसले स्वतन्त्रता कटौती गर्ने भन्या छ ? कहाँ भन्या छ ? कहिले भन्या छ ? भनेको प्रमाण देखाउन सक्नुहुन्छ ? नभनेको कुरा दुष्प्रचार गर्ने ? हेप्ने ?’
‘बोल्दा पनि किन हप्काउनु नि ?’ मैले आफ्नै रुन्चे आवाज सुनें ।
‘सचेत गराएकोलाई हप्काएको भन्ने ? सत्यतथ्य तोडमरोड गर्ने ?’ उनी कड्किए, ‘लकडाउनको अर्थ बुझ्नुभा’छ ? हामीले लागू गर्न खोजेको आंशिक लकडाउन होइन, पूर्ण लकडाउन हो । मन, वचन र कर्म तीनवटै एरियाको लकडाउन । के बुझ्नुभो ? अब त घैंटामा घाम लाग्यो होला नि ? कि अब पनि बुझ्न बाँकी छ ?’
म वाल्ल परें । बोली पनि हराएछ ।
‘तर हामी उदार छौं,’ उनी भन्दै गए, ‘पूरै स्वतन्त्रता कटौती गर्ने पक्षमा छैनौं । विरोधको ५० प्रतिशत कटौती गरे पनि समर्थनको ५० प्रतिशत स्वतन्त्रता त पूरै उपलब्ध गराउँछौं नि । त्यो अधिकार शतप्रतिशत के २०० प्रतिशत नै उपभोग गर्नोस् न । यसमा तपाईंलाई पूर्ण स्वतन्त्रता छ । योभन्दा बढी के चाहियो ?’
त्यही वेला प्रहरीले डोरी खोल्यो : ‘अब सब जना सोझै आ–आफ्नो घर जाने ।’
घर फर्किसक्ता पनि मेरो बोली फर्केको थिएन । चूपचाप खाना खाएँ र घप्लक्क सिरक ओढेर सुतें । लकडाउनको अर्थ थाहा पाइसकेपछि कोरोना नियन्त्रणका लागि एउटा जिम्मेदार नागरिकले पुर्‍याउन सक्ने योभन्दा ठूलो सहयोग के हुन्थ्यो र ?
भोलिपल्ट चोक–चोकमा ब्यानर टाँगिएको थियो : ‘आत्मा साक्षी राखी मन, वचन र कर्मले लकडाउनको पालना गरौं ।’
प्रकाशित : वैशाख १, २०७७ ०८:३५